Telefoonada - Qalabka Gadget | Wararka Gadget (Bogga 2)
Waxaad hadda heli kartaa mobilka Blackview BV8800, terminal aad u adkeysi badan oo la socda soo jeedin bilow ah oo aan la adkeyn karin.
Waxaan ku tusineynaa isbarbardhigga Doogee V20-ka cusub iyo kii si toos ah uga horreeyay Doogee V10, oo ah moodal natiijooyin fiican helay.
Realme GT Neo2, siideyntii ugu dambeysay ee shirkadda aan si qoto dheer u falanqeynay, miyay noqon doontaa kan xukuma bartamaha dhexe?
Huawei wuxuu doonayaa inuu sii wado haysashada mobilada isku laabmaya ee ugu fiican ee la socda Mate X2 in kasta oo Google ah
Aan aragno waxa Huawei Mate X2 noo keenayo mid cusub oo na siinaya sababo aan ugu gudbi karno mustaqbalka taleefanka gacanta.
In kasta oo ay adag tahay in Xiaomi Redmi Note 9 Pro uu caddeeyay inuu jiro, ma jiro taleefan casri ah oo suuqa yaalla oo u adkaysanaya dhibco ama kuuskuus kasta.
Ma iibsan karaa iPhone 12 ama mid hore loo dhimay?
Ma iibsan karaa iPhone 12? Aan aragno iPhone-yadii hore oo sii wadaya inay waxqabad heer sare ah sameeyaan. Beddel wanaagsan oo qiimo jaban ah.
Black Shark 3 iyo Black Shark 3 Pro, oo rasmi ah oo Yurub ah, kuwani waa astaamahooda iyo qiimahooda
Waxaan wajaheynaa cusbooneysiinta barta 'Gaming terminal par excellence', oo leh labo waji oo sifiican loo kala duwanaaday, oo wadaaga qeyb weyn oo kamid ah qalabkeeda.
Borotokoolka RCS waa beddelka dabiiciga ah ee SMS iyo MMS, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan dirno nooc kasta oo feyl ah sida haddii ay tahay codsi fariin ah oo bilaash ah
Sida loo sameeyo taleefankaaga casriga ah ayaa kaaga digaya markaad guriga ka fogtahay 1 km
Laga bilaabo Maajo 2, waxaa loo oggol yahay in lagu lugeeyo ama lagu ciyaaro isboortiga aag dhan 1km. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo dejiyo alaarmiga si aaysan noo dhaafin.
Huawei wuxuu ku saabsan yahay inuu soo bandhigo beta-ka loogu talagalay lakabkiisa u gaarka ah ee Android, halkan waxaan ku sheegi doonnaa boosteejooyinka la jaan qaadi kara iyo sida loo helo.
IPhone SE 2020 cusub ayaa rasmi ah kuwanna waa astaamahiisa
Waxaa loo sameeyay in la sugo dhibaatada caalamiga awgeed coronavirus darteed, laakiin waxaan horeyba ugu haysanay halkan, iPhone "raqiis ah" ayaa yimid.
Honor 30, Honor 30 Pro iyo Honor 30 Pro +: qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka
Shirkadda Aasiya ee Honor ayaa soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay dhamaadka-adduunka adduunka taleefanka. Sharaf…
OnePlus 8 iyo 8 Pro cusub ayaa horeyba rasmi ah. Maqaalkani waxaan kuu sheegeynaa dhammaan qeexitaannada, helitaanka iyo qiimaha khamaarkaan cusub ee OnePlus ee loogu talagalay heerarka sare
Tan iyo afartameeyadii markii ay bilaabatay, isticmaalka codsiyada wicitaanka fiidiyowga ayaa kordhay waxayna noqdeen kuwa ugu ...
Kani waa Xiaomi Mi 10 Pro iyo dhammaan badeecooyinka cusub
Soo bandhigida rasmiga ah ee wax kasta oo cusub oo ay Xiaomi u keento Semesterkan koowaad ee 2020, shaki la'aan waxay muujineysaa astaanta cusub ee sumadda.
Isbarbardhiga u dhexeeya Huawei P40 iyo Samsung Galaxy S20
Maqaalkani waxaan isbarbar dhigeynaa dhamaan boosteejooyinka qeybta ka ah Samsung's S20 kala duwan iyo Huawei's P40
Si fudud ugu dir meelaynta macalinkaaga Notebloc
Thanks to codsiga Notebloc, waxaan si dhakhso leh oo fudud ugu diri karnaa shaqadeena macalinka, daqiiqadahan markii fasalada la joojinayo.
Xiaomi Redmi Note 9s hadda waa rasmi: qiimaha iyo qeexitaannada
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan sifooyinka iyo qeexitaannada Redmi Note 9s ay na siiso, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
Soo ogow waxa ay ku kala duwan yihiin Huawei P30 Pro iyo Samsung Galaxy S20 cusub si aad u go'aansato midka fiican in la iibsado.
Huawei Mate Xs iyo dhammaan wararka sumadda loogu talagalay 2020
Jiilka labaad ee Huawei taleefanka gacanta ee isku laaban ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay waxaanan ku tijaabinay Gadget News.
Realme ayaa markale nagaga yaabisay Realme X50 Pro 5G cusub
Realme X50 Pro 5G cusub waa balanqaadka cusub ee Realme ee taleefanka dhamaadka sare, terminal leh waxqabadka ugu sareeya ee suuqa.
Xperia 1 II iyo Xperia 10 II waa dadaalka cusub ee Sony ee heerka sare iyo bartamaha
Sony waxay si rasmi ah u soo bandhigtay ballanqaadka cusub ee adduunka taleefanka, noocyo ka kooban laba terminaal: Xperia 1 II iyo Xperia 10 II
Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa hadda laga heli karaa Spain: qiimaha, qeexitaannada iyo isbarbar dhiga inta hartay
Shirkadda Kuuriya ayaa soo bandhigtay Febraayo 11, noocyada cusub ee S ee loogu talagalay 2020, oo ah nooc loo baabtiisay Galaxy ...
New Xiaomi Mi 10: waa mid ku dhow wax walba marka laga reebo qiimaha
Noocyada cusub ee Xiaomi Mi 10, horeyba waa rasmi oo wuxuu na siiyaa astaamo cajiib ah, taas oo keeneysa kororka qiimaha
Kee Samsung Galaxy S20 inay iibsato. Waxaan isbarbar dhigeynaa seddexda moodel
Run ahaantii magacaabideedii sannadlaha ahayd ee Febraayo, shirkadda Kuuriyada Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay sharadkeeda cusub ...
Galaxy S20 waa sharad cusub oo Samsung ah oo loogu talagalay dhamaadka-dhamaadka
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xaddiga cusub ee Galaxy S20 waxaa laga heli karaa qodobkan.
Galaxy Z Flip: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Samsung casriga cusub ee laallaabi karo
Sharadka cusub ee Samsung ee ku saabsan laabashada taleefannada casriga ah waxaa loo yaqaan 'Galaxy Z Flip', oo ah nooc casri ah oo isku laaban qolof leh qeexitaanno heer sare ah.
Isbarbardhiga: Huawei P30 Pro VS Realme X2 Pro
Waxaan u dhignay Huawei P30 Pro iyo Realme X2 Pro waji ka waji marka la barbardhigo kama dambaysta iyada oo fiidiyoow lagu daray, taas oo ah casriga ugu fiican?
Sida loo dheereeyo nolosha batteriga ee casrigaaga
Waqtiyada horumarka cajiibka ah ee warshadaha casriga ah ee aan la malayn karin waqti yar ka hor, batteriga ayaa sii socda ...
Sida loola socdo taxanaheena iyo filimada aan ka helno casriga
Dhowr sano ka hor, markii Emule uu ahaa dariiqa ugu weyn ee loogu raaxeysto nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira, hadey taxane ahayd ...
Sida loo haysto qashinka dib loo warshadeeyo ee ku shaqeeya Android
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad ku raaxeysato qashinka dib-u-warshadaynta ee Android, mahadsanid codsigan waa suurtagal, codsi
Ka ogow natiijooyinka Doorashooyinka Guud ee Isbaanishka 10N 2019 taleefankaaga casriga ah ama kiniinkaaga
Goobaha codbixinta ayaa hadda laga furay Spain oo dhan markii labaad sanadkan, aan aragno in markii labaad ...
Sida looga dhigo WhatsApp-kaaga mid amaan ah kana hortaga in la xado
Haddii aad rabto in qofna uusan awood u lahayn inuu galo koontadaada WhatsApp, kaliya waa inaad raacdaa taxane tallaabooyin aad u fudud ah oo aan kugu tusinno qodobkan.
Fiidiyow yar oo fudud ayaa ina tusaya waxa ugu horreeya ee dhabta ah ee Huawei Mate X cusub noqon karo
Jiilka afraad ee Google Pixel range ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Cusboonaysiinta ugu weyn waxaa laga helaa hawlgalka tilmaamaha.
Terminaalka cusub ee shirkadda Aasiya ee Huawei si ay ugu tartanto bartamaha ayaa loo yaqaan 'Note 5T' waxayna na siisaa qiimo aad u xiiso badan oo lacag ah.
Soo ogow waxa xaqiiqda ah in Huawei Mate 30 uu gaaro suuqa iyada oo aan la helin codsiyada Google iyo waxa lagu qaban karo kiiskan.
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro, dhamaadka-sare ee cusub ee nooca Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay magaalada Munich.
Waxaan ku tusineynaa dhammaan tillaabooyinka la raacayo si aad u awood ugu yeelatid cusbooneysiinta dhib la'aan iOS 13, nooca cusub ee macruufka ee hadda la heli karo.
Huawei P30 Pro wuxuu ku bilaabmayaa laba midab oo cusub oo leh Android 10
Soo ogow labada midab ee cusub ee Huawei P30 Pro oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019 ee magaalada Berlin isla markaana dhowaan iman doona suuqa.
LG G8X ThinQ: Nooc cusub oo heer sare ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan LG G8X ThinQ, taleefanka cusub ee ugu dambeeya shirkadda oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019.
Ka ogow dhammaan waxyaabaha ku saabsan LG K40s iyo K50s, taleefannada cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka soo jeeda astaanta Kuuriya oo si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda rasmiga ah ee rasmiga ah ee Samsung Galaxy Fold oo ay horay u shaacisay shirkadda lafteeda.
Soo ogow wax kasta oo ku saabsan Honor 20s iyo Honor Play 3, taleefannada cusub ee dhex-dhexaadka u ah nooca Shiinaha ee horeba rasmiga u ahaa.
Android Q waxaa loogu yeeri doonaa Android 10 oo macsalaameyn doonta macmacaanka: waxaan dib u eegeynaa dhammaan magacyada macmacaanka aad isticmaashay
Waxaan dib u eegeynaa dhammaan magacyada macmacaanka ee ay Android adeegsatay illaa iyo hadda si loogu magacaabo noocyada kala duwan ee Android ee ay ka bilaabayso suuqa.
Xiaomi waxay ku bilaabaysaa Mi 9T Pro Spain iyo dalal badan
Xiaomi ma doonayaan inay sugaan waqti dheer laga bilaabo markay soo bandhigaan wax soo saar ilaa ay ka bilaabaan adduunka oo dhan. Xiaomi Mi 9T Pro wuxuu yimid Spain
EMUI 10 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay: Dhamaan wararka
Soo ogow dhammaan wararka EMUI 10, nooca cusub ee lakabka u-habeynta Huawei ee horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Galaxy Note 10 vs Galaxy Note 10+: Sidee ayey ugu kala duwanyihiin
Soo ogow dhammaan farqiga u dhexeeya Galaxy Note 10 iyo Xusuusin 10+, oo horeyba si rasmi ah loogu shaaciyey munaasabad ka dhacday magaalada New York.
Black Shark 2 Pro: Xiaomi ee casriga ugu caansan ciyaaraha
Ka raadi wax kasta oo ku saabsan Black Shark 2 Pro, casriga casriga ah ee cusub ee Xiaomi oo laga bilaabay Shiinaha isla markaana dhowaan iman doona Spain.
Codsiyada si looga fogaado kamaradaha xawaaraha
Haddii aad rabto in safaradaada aysan noqon raaxo la'aan jeebkaaga, markaa waxaan ku tusineynaa kuwa ugu fiican codsiyada lagu ogaado radar
Fold Galaxy wuxuu bilaabi doonaa Sebtembar, tan waa inta isbadashay
Soo ogow dhammaan isbeddelada ay Samsung ku soo kordhisay Galaxy Fold si ay diyaar ugu noqoto in la bilaabo bisha Sebtember sida ay ku dhawaaqeen.
Haddii aad ku daashay wicitaanada nambarada taleefanada ee aadan aqoon, mahadsanid barnaamijyadan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato inay leeyihiin ikhtiyaar ay ku qaataan wicitaanka.
Falanqaynta tamarta magaalooyinka 4 falanqaynta dhagaha
Magaalada 4 ee Tamarta Sistem, naqshad midab qurux badan, tikniyoolajiyad casri ah si ay noo siiso tayada codka ugu fiican, ismaamul wanaag iyo miisaan aad u fudud.
Realme 3 Pro waxaa laga heli karaa laga bilaabo Juun qiimo aad u macquul ah
Laga bilaabo Juun 5, Realme 3 Pro wuxuu imaan doonaa Spain, terminal leh astaamo aad u wanaagsan oo ka qiimo badan wax kabadan.
Google wuxuu ka tagayaa Huawei bilaa Android, laakiin wuxuu marin u heli karaa Play Store ilaa hada
Go'aanka dowladda Mareykanka ee ah in shirkadda Huawei lagu daro liiska madow waxay horey u leedahay saameyntiisa ugu horreysa: ma awoodi doonto inay adeegsato Android-ka Google
Black Shark 2 wuxuu yimid Spain, kani waa boqorka cusub ee ciyaaraha moobiilka
Raadi wax badan oo ku saabsan Huawei P30, dhammaadka sare ee cusub ee sumadda Shiinaha, iyo dareenka ugu horreeya ee ay nooga tagto kiiskan.
Raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan noocyada cusub ee dhamaadka sare ee Huawei, oo ka kooban Huawei P30, P30 Pro iyo P30 Lite, oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Albaabka loogu talagalay kala-soocida shirkadda Huawei ee sannadka 2019 waa Huawei Y7 2019, terminal leh qiime aad u sarreeya oo tayo sare leh.
Sony Xperia 1: Dhamaadka dhamaadka sare ee Sony hadda waa rasmi
Raadi wax badan oo ku saabsan Sony Xperia 1, dhammaadka sare ee cusub ee Sony oo si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019 ee magaalada Barcelona.
Waxaan labada waji ee casriga ah ee isku laaban ka dhigeynaa suuqa fool ka fool, Samsung Galaxy Fold iyo Huawei Mate X, oo aad isugu eg isla mar ahaantaana ka duwan
Xiaomi waxay ka bilaabataa subaxda MWC-da Mi9-keeda cusub iyo Mi Mix 3 5G
Xiaomi waxay ku soo bandhigeysaa qalabkeeda cusub uguna horeeya 5G teknolojiyad MWC ee magaalada Barcelona, ​​Xiaomi Mi Mix 3 5G cusub.
Si loogu dabaaldego sannad-guurada XNUMXaad ee kala duwanaanshaha Samsung S, shirkadda Kuuriya waxay ballaarisay tirada qalabka ...
Samsung Galaxy S10e: qiimaha, astaamaha iyo helitaanka
Heerka 'Galaxy S' hadda waa rasmi. Laakiin markan oo ka duwan sanadaha kale, shirkadda Kuuriya ...
Samsung Galaxy S10: qiimaha, astaamaha iyo helitaanka
Galaxy S10 waa dhaxalka dabiiciga ah ee Galaxy S9. Sannadkan, si ka duwan daabacadihii hore, farqiga ugu weyn ...
Isbarbardhigga u dhexeeya Galaxy S10 iyo iPhone XS
Haddii aad ka shakisan tahay iibsashada Galaxy S10 ama iPhone XS, qodobkan waxaan si dhakhso leh uga saari doonnaa shakigaaga.
Ka dib toddobaadyo badan oo xan ah, iyo sida jadwalka loo dhigay, shirkadda Kuuriyada Koonfureed ee Samsung ayaa si rasmi ah u soo saartay noocyada cusub ...
Heerka Xiaomi Mi 9 horeyba waa rasmi. Maqaalkani waxaan ku tusinaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyadan cusub ee ka imanaya soosaaraha Aasiya ee Xiaomi
Fiidiyowga ugu horreeya waxaa lagu sifeeyaa aragtida Galaxy S10 iyo S10 +
Laba maalmood ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee qiyaasta Galaxy S10, dib u eegis fiidiyoow ah ayaa la daadiyay halkaas oo aan ku arki karno boosteejooyinka si faahfaahsan.
Qeexitaannada LG V40 ThinQ, oo la heli karo laga bilaabo Febraayo 4
LG-da cusub ee dhamaadka-sare, V40 ThinQ ayaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo Febraayo 4. Halka aan kuu sheegeyno dhammaan qeexitaankiisa.
Raac tilmaamahan si aad si sax ah u doorato moobilkaaga cusub
Ma qorsheysaa inaad beddesho moobilkaaga? Raac tilmaamahan tilmaam ahaan dhibic hana u seegin wax faahfaahin ah si aad si habboon ugu doorato mobilkaaga xiga.
Xiaomi iyo Movistar waxay ku biireen xooggooda si ay u iibiyaan Redmi 6 64GB si gaar ah
Ka hel qoob bilaash ah Fortnite adoo ilaalinaya koontadaada
Bilihii la soo dhaafay, ciyaarta xiddigga ee dhammaan barnaamijyada waa Fortnite, ciyaar saldhig u ah qeyb ka mid ah guusheeda iyadoo la heli karo soo dejinta Ragga ka socda Epic Games ayaa na siiya qoob ka ciyaarka cusub ee dabeecadeena Fortnite haddii aan sii wadno fulinta labada tallaabo. sugida si loo ilaaliyo koontadayada
Teknolojiyada qof walba: tani waa noocyada cusub ee casriga ah ee laga helo Wiko
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida qiimaha taleefannada casriga ahi ay si aad ah ugu kordheen inay kor u dhaafaan ...
Xiaomi waxay la socotaa calaamadeeda cusub ee Pocophone F1 waxayna kala goysaa suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay qiimaheeda
Waana in maalmo ka hor aan aragnay imaatinka nuuca cusub ee loo yaqaan 'Pocophone F1', oo ah nooca Xiaomi oo ...
Sawirada ugu horreeya ee Google Pixel 3 XL waa la sifeeyaa, laba bilood ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin
Tan iyo markii Google ay si buuxda ugu soo gashay suuqa taleefanka gacanta Google Pixel, shirkaddu waxay si tartiib tartiib ah u ballaarisay tirada waddamada Haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala ee sugaya inay arkaan naqshadda jiilka saddexaad ee Google Pixel XL Next, waxaan tusaynaa adiga waa sawirradii ugu horreeyay ee terminal, 2 bilood kahor soo bandhigideeda.
Pocophone F1 ee Xiaomi, waa rasmi oo kuwani waa tilmaamahooda ugu muhiimsan
Oo halkan waxaan ku haynaa casriga casriga cusub ee Xiaomi oo diyaar u ah inuu qaato moodooyinka heerka sare. Cusub…
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A waxay si rasmi ah Spain uga yimaadeen € 119
Ballaarinta Xiaomi ayaa ka socota dalkeenna tanina waxay u tarjumaysaa aalado cusub oo bilaabaya in la suuq geeyo ...
Faahfaahin fool-ka-fool ah oo cusub Samsung Galaxy Note 9 iyo Galaxy Note 8
Shaki la'aan markii qalab cusub oo leh astaamaha Samsung Galaxy Note 9 la soo saaro, waxaa jira isticmaaleyaal badan ...
Dhowr saacadood, calanka cusub ee shirkadda Kuuriya ee Samsung ayaa durbaba rasmi ah. Galaxy Note 9 ...
Samsung Galaxy Note 9 horeyba waa rasmi, waxaan ku tuseynaa qeexitaannada
Bilooyin badan oo xan ah ka dib, maanta oo ay taariikhdu tahay 9-ka Ogosto shirkadda Kuuriya waxay si rasmi ah u soo bandhigtay terminal-ka cusub ee Note note, oo ah terminal ay la socoto Haddii aad seegtay soo-jeedinta, hoosta waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta Samsung Galaxy Note 9.
Samsung ayaa si rasmi ah ugu soo bandhigeysa Galaxy Note 9 magaalada New York [Toos]
Dhowr toddobaad kadib markii ay soo baxeen warar xan ah iyo dillaac ku saabsan nooca cusub ee Samsung ee bishii ...
Bishan waxaad si rasmi ah uga iibsan kartaa Spain Xiaomi Mi 8
Tallaabo kale oo ay qaadatay shirkadda Xiaomi si kor loogu qaado iibinta qalabkeeda dalkeenna waana taas ...
Fortnite for Android waxay u gaar noqon kartaa Samsung maalmaha ugu horreeya ee 120
Wax yar usbuuc ka hor, waxaan ka dhawaajinay war sheegaya in ciyaarta moodada ah ee Fornite, oo aan wali laga helin Android, Sida ku cad macluumaadka cusub, gaar ahaanshaha Fortnite ee Samsung wuxuu sii dheeraan karaa ilaa 120 maalmood oo dheeri ah, horeyba waa tan dhammaadka muddada 30-maalmood ee Xusuusin 9, waxaa loo kordhin lahaa illaa Samsung S.
Kani waa xaashi farsamo ee Samsung Galaxy Note 9
Iyadoo wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin nuucaan cusub ee Samsung, astaamaha iyo tilmaamaha ...
Fortnite for Android wuxuu gaar u noqon doonaa Galaxy Note 9 inta lagu jiro bisha ugu horreysa
Qaar badan ayaa ka mid ah dadka isticmaala Android ee sugaya sida biyaha bisha Maajo, soosaarida nooca Android ee Fortnite, ciyaarta moodada ah sida laga soo xigtay ilo kala duwan, Fortnite wuxuu gaar u imaan karaa Galaxy Note 9 maalinta la soo bandhigayo, soo socota Agoosto 9, oo gaar ah oo socon doonta bil.
Kuwani waa qeexitaannada iyo qiimaha Xiaomi Mi A2 iyo Mi A2 Lite
Dhowr saacadood kadib markii Xiaomi Mi A2 cusub si rasmi ah loo sameeyay isla markaana ay ka badan tahay 24 ...
Xiaomi Mi A2 waa la iibin karaa 24 saac ka hor soo bandhigidiisa
Maanta jiilka labaad ee Xiaomi Mi A1, Mi A2, oo ah terminaal si weyn loo saadaalinayo, guushii uu ka horreeyay muujiyay awgeed, 24 saac ka hor inta aan bulshada lagu soo bandhigin, ayaa Xiaomi Mi A2 iyo nooca Lite-ka horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay. iibsiga iyada oo loo marayo Gearbest
WhatsApp wuxuu xaddidi doonaa tirada jeer ee farriimaha la gudbin karo
Xaqiiqdii waxaan dhamaanteen helnay farriinta marmar loo soo gudbiyo WhatsApp ee ku saabsan sheyga wararka, dalab marin habaabin ah ama khiyaano ah. Gelinka dambe ama Madal farriinta adduunka ka talisa waxay hadda ku dhawaaqday isbeddello tirada jeer ee aan awood u yeelan doonno inaan farriimaha u gudbinno.
Sawirada, qiimaha iyo midabada Samsung Galaxy Note 9
Hoos waxaan ku tusi doonaa dhammaan macluumaadka aan maanta ka ognahay Samsung Galaxy Note 9, terminal la soo bandhigi doono Ogosto 9
Shirkada sii wadaysa balaadhinta dalkeena waxay soosaaraysa hal qalab asbuucii ficil ahaan. Toddobaadkii hore waxaan ...
Hadda haa, maahan hadda ... Samsung Galaxy S10 ayaa ku dari kara dareeraha sawirka faraha shaashadda hoosteeda
Hadda waxay u muuqataa in moodooyinka cusub ee shirkadda Koonfurta Kuuriya ay ku dari doonaan dareeraha sawirka faraha ...
Nokia 8110 Reloaded ayaa timid Spain iyadoo qiimaheedu yahay 79 euro
Waxaan ku jirnaa xilligaas oo ay Nokia mar dambe naga yaabinaynin soo bandhigida aalado "duug ah" laakiin tan ...
On July 10, casaan ayaa ku iman doona OnePlus 6
Taleefanka casriga ah ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee OnePlus wuxuu ku darayaa midabka casaanka taasna waxay nooga dhigeysaa inaan aragno lamaane ...
Galaxy Note 9 waxaa la soo bandhigayaa Ogosto 9
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa bilowday inay casuumaad u dirto saxaafadda munaasabadda ay qabanayso si loogu soo bandhigo Galaxy Note 9
Samsung waxay taariikh rasmi ah ka dhigaysaa furaha Galaxy Note 9
Xaqiiqduna waxay tahay in dhowr maalmood hada la isku dhawaaday dhacdadii "Unpacked" ee qaabka cusub ayaa lagu xamanayay ...
Google ee Pixel 3 iyo Pixel 3 XL ayaa mar kale ka muuqda shabaqa [sawirada]
Waxaan aad ugu dhownahay inaan aragno waxa noqon doona nooca saddexaad ee Google Pixel iyo Pixel XL, qalabka qaar ...
Huawei P20 Pro oo loogu magac daray "Smartphone-ka ugu fiican sanadka 2018" oo ay soo saareen Ururka Qalabka Yurub
Xaaladdan oo kale waa abaalmarin ay bixisay European Hardware Association, oo aan sidoo kale ka heli karno ...
IGTV, kani waa codsi cusub oo Instagram ah oo lagula tartamayo YouTube
Instagram waxay rabtaa inay la tartanto YouTube. Oo waxay ku samayn doontaa iyada oo leh muuqaalkeeda cusub ee fiidiyoowga ah ee loo yaqaan 'IGTV'. Ama maxaa lamid ah: Instagram TV
Kani waa shaashadda Samsung Galaxy Note 9
Wax yar ayaa nooga harsan inaan si rasmi ah u aragno nooca cusub ee Samsung Galaxy Note 9 mooyee walina daadadka wali waa maalin….
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro waxay ku dari doonaan furitaanka wajiga
Huawei wuxuu sii wadaa inuu keeno ugu fiican tiknoolajiyada qalabkiisa kiiskan waxaan leenahay imaatinka wax walba ...
OPPO Find X, kani wuxuu noqon doonaa "casriga" ay shirkaddu ka furto Spain
OPPO Find X waa terminalka soo socda ee shirkadda Shiinaha ee ka dhigi doonta dhulka calaamadda ah Spain. Halyeeyadeeda ugu weyn? Kaameraddaada hore
Naqshadeynta Google Pixel 3 XL ayaa ku daatay mahadnaq kiis sameeye
Maaha kii ugu horreeyay mana noqon doono markii ugu dambeysay ee taleefan casri ah si toos ah loo dusto ...
LG X5, waa xubin cusub oo ka mid ah waxyaabaha la gelinayo oo leh batteri aad u weyn
LG X5 waa taleefan casri ah oo heer sare ah oo wata batari ay tahay inuu kugu qabto, xaaladaha caadiga ah, illaa iyo laba maalmood
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Samsung ay bilaabi karto daabacaad gaar ah oo ah Galaxy Note 9 oo leh ilaa 512 GB oo keyd gudaha ah.
OxygenOS 5.1.6 waa lagala noqday shilalka ka dhacay OnePlus 6 awgeed
Haddii ay jirto shirkad ay dhab ka tahay cusboonaysiinta nidaamka, waa OnePlus. The…
Kuwani waa midabada Samsung Galaxy Note 9
Sannadkan waxaan aragnaa xan xan iyo xogo muhiim ah oo ku saabsan qaabka cusub ee shirkadda Kuuriyada Koofureed waana taas ...
Xiaomi Redmi S2 wuxuu yimid Spain, mobilada ugu fiican ee sawirada
Xiaomi waxay ku sii socotaa ogeysiisyadeeda daqiiqado ka horna waxay daabacday soo bandhigida Xiomi Redmi S2 ee Spain. La aan…
LG Q Stylus waa bedelka LG ee Galaxy Note
Tan iyo markii uu yimid suuqa, Samsung Galaxy Note wuxuu noqday tixraac suuqa ...
Sida loo rakibo iOS 12 iPhone ama iPad
Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12 ayaa hadda la heli karaa si ay horumariyayaashu u bilaabaan inay la qabsadaan barnaamijyadooda ku saabsan nooca cusub ee iOS. Waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo qalabkaaga.
Google waxay bilaabi kartaa miisaaniyad Pixel
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Raadiyaha raadinta wuxuu ka shaqeyn doonaa Pixel qaali ah si uu u buuxiyo dalabkiisa bartamaha, iyadoo uu maamulo Qualcomm's Snapdragon 700.
Galaxy A9 Star: Samsung miyuu soo guuriyey qaybo ka mid ah iPhone X?
Shaandheeyay nashqadda cusub ee Samsung Galaxy A9 Star.Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi shirkadda Kuuriya ee ay sheeganayaan inay ku dhiirrigelisay naqshadda iPhone X.
Android Oreo wuxuu gaaraa LG G6 dalkeena
Maalin dhaweyd waxaan ka hadalnay ku dhawaaqista Nokia ama halkii HMD Global, ee ku saabsan cusbooneysiinta Android ...
Xiaomi Mi 8: sifooyinka, noocyada iyo dhammaan faahfaahinta
Xiaomi Mi 8 waa dhamaadka sare ee shirkadda Shiinaha. Qoyskan waxaan ka helnaa marka lagu daro nooca asalka ah ee Xiaomi Mi 8 SE iyo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta.
Xiaomi Mi 8: oo leh «Notch», Aqoonsiga wajiga, sirdoonka macmalka ah iyo saddex nooc oo kala duwan
Xiaomi waxay soo bandhigtay astaanteeda cusub: Xiaomi Mi 8. In kasta oo ay layaab ku noqotay dhammaan kaqeybgalayaasha, waxaa jiri doona seddex nooc oo la heli karo. Nooca asalka ah waxaa ku soo biiray Xiaomi Mi 8 SE iyo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
HMD Global waxay ku dhawaaqeysaa imaanshaha Android P dhamaan Nokia
Waxay umuuqataa in soosaarayaasha qaar ay si dhab ah uqaadayaan arinta cusbooneysiinta qalabkooda noocyada ugu dambeeyay ee la heli karo ...
Hadda iibinta HTC Desire 12+ oo ah 249 euro
Shirkadda Taiwan-ka ah ee HTC, ayaa hadda barte-keeda cusub ee 2018 ku iibisay Spain, HTC Desire 12+ oo keliya 249 euro.
Motorola Moto Z3 Play ayaa bixiya
Tixraacyo taxane ah oo cusub ee Motorola Moto z3 Play ayaa la sifeeyey ka dib markay yimaadeen ...
Xiaomi Mi 8, faahfaahin dheeraad ah ayaa soo ifbaxeysa ka hor intaan la bilaabin
On May 31, 2018, Xiaomi Mi 8 cusub, oo ah calankii ugu dambeeyay ee shirkadda Aasiya, ayaa la soo bandhigay. Xog cusub ayaa la ogaaday: midabbo kala duwan; 3D iskaanka wajiga oo uu leeyahay Animojis
Lenovo wuxuu soo bandhigi doonaa hal abuurnimadiisa Lenovo Z5 bisha Juun 5
Shirkadda ayaa horay u dirtay casuumaadaha munaasabadda la filayo taas oo ah nooca xiga ee ...
Vivo Y83: oo leh «Notch», oo leh MediaTek Helio P22 iyo 200 euro
Vivo Y83 waa taleefan casri ah oo ku saleysan Android oo ah aaladda ugu horreysa ee lagu daro MediaTek Helio P12 22 nm processor
Andy Rubin ayaa beeniyay in Muhiimka uu yahay iib, inkasta oo uusan isagu laftiisu ogeyn waxa mustaqbalkiisu yahay
Sida laga soo xigtay Bloomberg, Andy Rubin, ex-Google iyo aasaasaha Essential, ayaa iibin kara shirkadda ka dib lambarrada xun. Si kastaba ha noqotee, aasaasihu wuxuu horey u dajiyay niyadda shaqaalihiisa
Samsung Galaxy J8, mobiil gaadhaya 6 inji iyo kamarad gadaal labalaab ah
Samsung Galaxy J8 waa taleefan gacmeed weyn oo ka socda shirkadda weyn ee Aasiya oo bisha July lagu iibinayo Hindiya. Waxay leedahay shaashad 6-inji ah iyo labo lens oo kamaraddeeda ugu weyn leh
Waxaan horey u ogaanay taariikhda iyo qiimaha cusub ee LG Q7, oo ah xarun aad u xiiso badan oo bartamihii dhexe ah oo dooneysa inay kugu guuleysato astaamaheeda
Kani waa casriga casriga ah ee HTC, HTC U12 +
Waxay u muuqan kartaa in HTC ay luntay suuq joogto ah oo firfircoon markay timaado soo bandhigida qalab cusub, laakiin ...
HMD Global, oo hadda ah milkiilaha taleefannada Nokia, ayaa shalay shaacisay ururinta ...
Waxay u badan tahay in iyada oo loo marayo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ama koonto kasta oo kale, aad naftaada arki doonto ...
Alcatel 3, 3C, 3L, 3V iyo 3X oo horeyba looga heli jiray Spain
Hoos waxaan ku tusi doonaa dhammaan qeexitaanka iyo qiimaha noocyada cusub ee Alcatel 3, 3C, 3L, 3V iyo 3X ee sanadkan.
Xiaomi Mi 8 wuxuu lahaan doonaa shidanka sawirka faraha shaashadda hoosteeda
Terminal-ka ugu horeeya ee shirkadda Xiaomi oo leh shaashada sawirka shaashada hoosteeda ayaa noqon doonta Xiaomi Mi 8, oo ah terminal laga yaabo inuu arko iftiinka maalinta 31-ka May.
Instagram ayaa noo sheegi doonta inta aan isticmaalno arjiga
Instagram waxay tijaabineysaa shaqo cusub oo noo oggolaan doonta inaan ogaanno inta aan ka isticmaalno dalabka taleefannada casriga ah.
Dhamaan qeexitaanada HTC U12 + waa la sifeeyay maalmo kahor soo bandhigida
Sidii caadiga ahayd ee soo saareyaasha Android, laba maalmood ka hor soo bandhigga rasmiga ah ee HTC U12 +, dhammaan tilmaamaha terminalkan hadda waa la sifeeyey.
Fortnite for Android ayaa imanaya xagaagan
Xilligan la joogo bilaabista Fortnite ee loogu talagalay Android waa inay sugtaa dhowr bilood oo dheeri ah, sida ku cad Epic Games iyada oo loo marayo degelkeeda.
The OnePlus 6 ayaa lagu tijaabiyey ilaa xad. Imtixaanka iska caabinta
Waqti badan ayey qaadatay ilaa aan joojinay inaan daawano muuqaal ku saabsan tijaabinta iska caabinta aaladda gacanta ...
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqayaa imaatinka Xiaomi Redmi Note 5 iyo Mi MIX 2S Spain
Waxaan joognaa kahor intaanan bilaabin laba nooc oo muhiim ah Xiaomi waana tan Xiaomi Redmi Note 5 iyo Xiaomi ...
Samsung waxay ku soo bandhigeysaa Galaxy S9 iyo S9 Plus Burgundy Red iyo Sunrise Gold
Shirkadda Koonfurta Kuuriya ayaa soo bandhigtay laba midab oo cusub noocyadeeda kala duwan ee Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy S9 ...
Maamuusta 10: midabbo badan, naqshad la mid ah kana raqiisan Huawei P20
Shirkadda Huawei waxay dhibaato ku haysataa gurigeeda, tanina waa sharaf, taas oo weli ah astaan ​​ka ...
Kani waa casriga casriga ah ee soo socda ee Lenovo oo leh shaashad dhammaan shaashadda leh
Lenovo ayaa ka shaandheysay madaxweynaheeda, taasoo bixinaysa waxa uu noqon doono taleefanka casriga ah ee ugu horreeya suuqa oo dhan, oo leh saamiga shaashadda 85%
OnePlus 6: sawirada, qiimaha iyo tilmaamaha
Laba maalmood ka hor soo bandhigga OnePlus 6T, German Amazon ayaa siideysay waxa noqon doona labada qiimaha terminalka iyo sawirrada rasmiga ah ee rasmiga ah ee ugu horreeya ee saldhigga oo ay weheliso qeexitaankiisa
2,4 milyan oo taleefannada gacanta ah ayaa Xiaomi ka iibisay Yurub intii lagu jiray Q1 2018
Shaki kuma jiro in Xiaomi uu si xoog leh ku soo galay qaaraddii hore tanina waxaa muujiyay aqbalaadda wanaagsan ...
Valve wuxuu ku dhawaaqay in maalmo yar gudahood uu jiri doono barnaamij bilaash ah labada iPhone iyo Android kaas oo kuu oggolaan doona inaad ka ciyaarto cinwaannada madal adigoo moobilkaaga wata
Wiko View2: 6 inji oo leh qaab 19: 9 ah kaliya 199 euro
Haddii aad qorsheyneysay inaad cusbooneysiiso terminaalkaaga dhawaan, waa inaad tixgelisaa terminaalka cusub ee Wiko, View2, oo ah terminal leh qiime aad u wanaagsan oo tayo leh.
Fure-xumada cusub ee saameysa Android-ka waxaa loo yaqaan ZookPark waxayna basaastaa wax walboo aan sameyno
Khayaanada cusub ee halista ah ee ZooPark ayaa sanadihii la soo dhaafay u xuubsiibtay inay noqoto aalad aad u khatar badan oo basaasidda ka dhexeysa dalalka.
Patent-kan ayaa ina tusaya sida Samsung Galaxy X la filayo inuu u shaqeyn doono
Gelitaanka meesha aan ka hadli doonno sawirrada cusub ee la xiriira patent-ka noo oggolaanaya inaan aragno waxa Samsung Galaxy X, oo ah aalad isku laaban, ay ku jiri karto mustaqbalka fog.
HTC waxay ku dhawaaqday daahfurka HTC U12 oo leh iPhone 6 Qaybaha
23-ka Maajo, shirkadda Taiwanese waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa calankeeda soo socota ee loo yaqaan HTC U12 ama U12 + sida ugu dambeyn loogu yeero.
Wiko Jerry 3, kala duwanaanta gelitaanka ee leh Android Oreo iyo qiimaha ka hooseeya 100 euro
Shirkadda Faransiiska ah ee Wiko ayaa soo saartay aalad cusub oo heer-gelitaan ah: Wiko Jerry 3, taleefan casriyeysan oo leh astaamo xiiso leh iyo qiime isku dheellitiran.
Huawei wuxuu soo bandhigayaa 2018 Y Series cusub: laba taleefannada gacanta oo leh waxqabad wanaagsan iyo qiimo lagu hagaajiyay
Waxay u muuqataa in Huawei uusan wali sii joogi karin ilbiriqsi oo uu hadda uun ku dhawaaqay daahfurka taxanahiisa cusub ...
LG G7 ThinQ, calanka oo waliba sharad ku dhigaya Caanka caanka ah
LG G7 ThinQ waa dhamaadka-sare ee sanadkan 2018 oo ku sharadaysa naqshad bilaa qaab ah; sharad badan oo ku saabsan Sirdoonka Artificial iyo codka dhawaqa ah
Huawei waxay horumarin kartaa nidaamkeeda hawlgalka
Shirkadda Aasiya ee Huawei waxay ku shaqeyneysaa nidaamkeeda hawlgalka si ay ugu bedesho Android, haddii ugu dambeyntii dowladda Mareykanka ay sidoo kale cunaqabateyn ku saarto ka gudubka xayiraadaha Mareykanka ee Iiraan.
Koox burcad ah oo PUBG jabsata ayaa lagu xiray Shiinaha
Tencent, oo ka mid ah horumariyeyaasha PUBG, ayaa sameyneysa wax kasta oo ay ku heli karto haakarisyada iibiya qishka bixiya lacagaha ciyaarta si ay u arkaan lafahooda xabsiga.
Huawei P20 iyo Huawei P20 Lite Pink waxay ku gaar yihiin El Corte Inglés
El Corte Inglés iyo Huawei waxay ku biirayaan xoogagga si gaar ah ugu soo bandhigaya Huawei P20 Lite iyo Huawei P20 oo casaan u ah dhammaan macaamiishooda.
IPhone wuxuu cusbooneysiin doonaa iOS 12, in kastoo aysan aheyn
Cusbooneysiinta soo socota ee iOS 12, waxay umuuqataa inay muujineyso, inay la jaan qaadi karto iPhone 5s, oo ah terminal suuqa ka jiri doona dhowr bilood.
Samsung 'AR Emoji' waa la isticmaali karaa inta lagu jiro wicitaanada fiidiyaha mustaqbalka
Intii lagu jiray MWC-dii ugu dambeysay ee magaalada Barcelona, ​​shirkadda South Korea ayaa soo saartay AR Emoji shirkaddeeda cusub ee Samsung Galaxy S9 iyo Galaxy ...
eBay ee macruufka ayaa mar hore noo ogolaanaya inaan iskaanno barcode si loo iibiyo alaabada
Codsiga eBay wuxuu hadda helay hawl cusub oo noo oggolaanaysa inaan iskaanno barcode ee alaabada aan dooneyno inaan iibino oo aan awoodno inaan si toos ah u buuxino faahfaahinta alaabta.
Ciyaarta Fortnite waxay ka saareysaa gantaalada la hago
Ragga ku jira Epic waxaa lagu qasbay inay tirtiraan mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ay soo bandhigeen dhowr toddobaad ka hor, ka dib markay arkeen sida isticmaaleyaashu u dareemayaan inaysan iska difaaci karin hubka noocan ah markii uu adeegsado cadowga.
Sony Xperia XZ2 Premium, kamaradda laba-geesoodka ah ayaa gaadhaysa taleefannada Japan
Sony Xperia XZ2 Premium waa mobiil ka socda shirkadda Japan oo leh laba dareemayaal kamaraddeeda dambe; chip Snapdragon 845 iyo bandhig 4K ah
Sawirro sifeysan oo dahab ah iPhone X
Dahabka iPhone X waa la soo daadiyay hadana FCC ayaa la xaqiijiyay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Apple kaasoo sawirradiisii ​​ugu horreeyay ay durba run yihiin.
Miyaynu isku daynay WTF?! Smart Stickers, oo ah taageero kuxiran koronto badan
WFT?! Smart Sticker, Waxaan ka hadlaynaa taageero khafiif ah oo si fudud loo adeegsan karo taas oo noo oggolaan doonta inaan qaadno sawirrada ugu fiican isla markaana aan dhigno taleefanka gacanta saldhig si aan u awoodno inaan cunno saacado iyo saacado fiidiyoow ah.
Firefox waxay awood u siineysaa ilaalinta raadinta asal ahaan qaabkeedii ugu dambeeyay ee macruufka
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Firefox waxay awood u siineysaa ilaalinta dabagalka, sidaa darteed marwalba waa nalaga ilaalin doonaa qalabka raadraaca ee bogagga aan booqano.
Xogta LG V35 ayaa muuqata iyo inaannaan si rasmi ah u soo bandhigin LG G7
In kasta oo LG uu sii wado diyaarinta dhacdadiisa 2-da May ee soo socota magaalada New York, ee ...
Qalabka Android ee ku habboon Fortnite
Mid ka mid ah ciyaaraha muujinta, ee loogu talagalay aaladaha moobaylka, bilaha 4 ee aan sanadkan joognay wuxuu ahaa Fortnite, la'aanteed ...
Honor 7C iyo Honor 7A oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Spain
Galabnimadii ayaa sharaftii cusub ee 7C iyo 7A lagu soo bandhigay gudaha Isbaanishka, kuwani waa laba qalab oo cusub oo ka ...
ZTE Iceberg ayaa shaashadda ku lahaan doonta laba nooc
Naqshadeynta ZTE Iceberg waxay muujineysaa shaashad laba jibaaran shaashadda. Ka ogow wax badan oo ku saabsan naqshadeynta nooca cusub ee astaanta ee layaabka leh adigoo sharad ku galaya shaashad labalaab ah.
Waxaan horeyba uheysanay taariikh laxaqiijiyay oo ah soo bandhigida rasmiga ah ee calanka cusub ee LG, bisha soo socota ee May 2da ...
Shaandheeyay naqshadda Xiaomi ee Black Shark kahor soo bandhigideeda
Shirkadda Xiaomi ee loo yaqaan 'Black Shark' ayaa ku daatay sawirradeedii ugu horreeyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka gamer-ka sumcadda Shiinaha oo si rasmi ah loogu soo bandhigi doono toddobaad gudihiis dhacdo keliya.
Xiaomi waxay gebi ahaanba baabi'ineysaa kaydka Mi Mix 2s ee Shiinaha
Warka wanaagsan ee shirkadda Shiinaha in usbuuc ka dib markay soo bandhigeen aaladda ay beddesho ...
Samsung waxay bilaabi kartaa Galaxy S9 oo ah nooca yar
Sida laga soo xigtay xogaha ugu dambeeyay ee ka imanaya Shiinaha, Samsung waxay bilaabi kartaa nooc yar oo ah Galaxy S9 kaas oo loola jeedo kaliya suuqa Aasiya.
Nokia 9 Waa Soo Bandhigtay: Dhammaan Waxyaabaha Qarsoon Ayaa Qarsaday
Waraaqda farsamada ee shirkadda soo socota ee Nokia ayaa gebi ahaanba la faafiyay: Nokia 9. Waxay leedahay astaamo farsamo oo cajaa'ib leh oo aan cidna uga tegi doonin dhaqaaqin
100 euro dhimis ah qiimaha Xiaomi Mi Mix 2
Shaki la'aan, imaatinka rasmiga ah ee shirkadda weyn ee Shiinaha ee waddankeena waa guul dhab ah dhan walba….
Xiaomi Mi MIX 2S, calanka cusub ee Shiinaha ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Xiaomi Mi MIX 2S waa sheeko ka timid shirkadda Shiinaha oo leh naqshad qaabeysan; oo leh lacag la'aan wireless; kamaradeeda ayaa ah laba dareemayaal waxayna leedahay nooca ugu dambeeya ee Android lagu rakibay
Wararkii ugu dambeeyay ee la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in Samsung Galaxy Note 9 uu noqon doono shirkadii ugu horeysay ee shirkad ku darto akhristaha sawirka faraha
Kani waa Samsung Galaxy J7 Prime 2 cusub
Samsung Galaxy J7 Prime 2 durbaba waa rasmi shirkadda South Korea-na waxba ma qabanayso ...
Ka warbixi shaashadda Samsung Galaxy S9 iyo S9 + cusub
Toddobaad keliya markii la bilaabay suuqa, qaar ka mid ah moodooyinka cusub ee shirkadda South Korea ee Samsung ...
Tilmaamaha OnePlus 6 ayaa xaday
Marka bilaabida OnePlus 3 ay wali naga xigto 6 bilood, qeexitaanada ugu muhiimsan ee xarunta xiga ee OnePlus waa la dusiyay.
WhatsApp loogu talagalay KaiOS, oo ah nidaamka hawlgalka ee Nokia 8810 cusubi xambaarsan yahay
Ma ogtahay in Nokia 8810 cusub uu ka hoos shaqeeyo KaiOS? Miyaad ka fikireysaa inaad mid hesho? Hagaag ku dar faa iidooyin badan maxaa yeelay waxaa jiri doona nooc ka mid ah WhatsApp ee KaiOS
Huawei P20 Pro, faahfaahinta la soo bandhigay iyo kamarad saddex-gees leh 40 megapixels
27-ka Maarso ee soo socota waxaan ballan la leenahay Huawei. Calankeeda soo socota ayaa lagu soo bandhigi doonaa dhacdada loo qorsheeyay: Huawei P20 Pro
HTC waxay ku bilaabaysaa laba qalab oo cusub: HTC Desire 12 iyo Desire 12+
Markii aan kaqeyb galnay MWC sanadkaan waxaan waydiinay qaar kamid ah dadka mas'uulka ka ah istaagga inay wax cusub ka ogyihiin ...
Waxaan si fiican u baaraynaa fiidiyowga na tusaya iPhone SE 2
Muddo dheer ayaan wada hadlaynay oo waxaan aragnay warar xan ah oo ku saabsan suurtagalnimada in Apple ay soo saari doonto nooc cusub oo ah ...
Apple wuxuu markale iskudayaa joornaalada dhijitaalka ah
Ragga ka socda Cupertino ayaa aaday dukaameysiga waxayna iibsadeen adeegga rukunka joornaalka ee 'Texture', oo na siiya rukumo in ka badan 200 joornaal oo kaliya $ 9,99.
Tani waa sida ay u shaqeyso kaameradda isbeddelka isbeddelka ee Galaxy S9 iyo S9 +
Ragga ku jira iFixit waxay falanqeeyeen hawlgalka kamaradda laba-furitaanka ee Galaxy S9, si ay noo tusaan sida loo soo saaray iyo sida ay u shaqeyso.
Xiaomi waxay dukaan cusub ka furi doontaa Spain 17-ka Maarso
Xiaomi wuxuu ku leeyahay 3 dukaanno muuqaal ah Spain: laba Madrid iyo mid ku yaal Barcelona. Si kastaba ha noqotee, waxay furi doonaan mid cusub bisha Maarso 17
Android P waa dhamaadka xadka Nexus
Nooca xiga ee Android, Android P, la jaanqaadi maayo moodooyinka ugu dambeeyay ee nooca Nexus ama kiniinka Google ee Pixel C.
Samsung Galaxy Note 9 horeyba wuxuu uga muuqday shabakada
Maanta moodooyinka cusub ee shirkadda South Korea ayaa laga bilaabay suuqa Amazon, iyo, ...
Telefoonka Fudud 2: Taleefanka ugu fudud adduunka oo leh shaashad khad ah
Taleefanka fudud 2: Taleefanka casriga ah ee ugu fudud adduunka. Waxbadan ka ogow taleefankan loo xayaysiiyay inuu yahay kan ugu fudud adduunka iyo astaamahiisa.
Kuwani waa telefoonnada moobiillada dhexe ee ugu wanaagsan ee la heli karo ka dib MWC
Saldhigyada ku dhow 300 euro ee la soo bandhigay inta lagu gudajiray Shirweynihii Adduunka ee Mobile-ka ee 2018 waxayna u muuqan doontaa soo jiidasho weyn
Vodafone ayaa ka horeysa Huawei waxayna soo bandhigeysaa Huawei P20 Lite cusub. Qiimaha iyo faahfaahinta ayaa lagu daray
Taasina waa tan maanta ma seegi karno fursad aan ku ogaanno qalab maalmo ka hor ...
New Samsung Galaxy S9 iyo S9 Plus, xiriirkii ugu horreeyay tan iyo MWC
Shaki la'aan, sanadkan wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan marka la eego soo bandhigida noocyada taleefannada waaweyn ...
ASUS waxay layaabtay ASUS ZenFone 5 kaladuwanaanta MWC 2018
Waxay u muuqatay in ASUS ay sugeysay wax walba oo ay ku nastaan ​​qaab dhismeedka Shirweynaha Caalamiga ah ee Wareegtada ee ...
Vivo APEX, mobiil leh kamarad dib looga noqon karo iyo shaashad dhan
Vivo waxay joogtaa MWC waxayna ku sameysaa nooc telefon casri ah oo soo jiitay dhamaan ka soo qeyb galayaasha. Magaciisu waa Vivo APEX
Nubia waxay ku khamaaraysaa ciyaaraha casriga ah waxaanan ku tijaabinay Z17s-ka MWC
Shirkadda Shiinaha ayaa si cad u cad waxa ay rabto mustaqbalka dhow ee noocyada taleefannada casriga ah waana ...
Wiko waxay ku soo bandhigeysaa taleefannada casriga ah MWC, xiddigaha waa View 2 iyo View 2 Pro
Shirkada Faransiiska ayaa sii wadata wax soo kordhinteeda sanadkaana 8 aalado cusub ayaa laga soo saaray dhacdadii ka dhacday magaalada Barcelona, ​​ee ...
Sony Xperia XZ2 iyo XZ2 Compact, horay ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Sony waqti dheer kuma qaadan inay soo bandhigto qalabkeeda markii moodooyinka cusub ee ...